Akụkọ - sonyere na ngosipụta anụmanụ banyere mba ụwa nke iri na asatọ emere na Changsha
Ntụ ntụ na Premix
Mbadamba na Bolus
Soro na 18th Animal husbandry Exposition nke emere na Changsha
Hebei Junyu ọgwụ co., Ltd gara 18 mba anụmanụ husbandry na ẹkenịmde ke Changsha on Sep.2020.
Junyu ụlọ ọrụ nwere afọ 20 ahụmahụ anụ ọkụkọ, ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ, aqua na nkà mmụta ọgwụ ụlọ ọrụ, nke bụ n'elu 20 emeputa na China, na asambodo n'okpuru ISO na GMP, The ụlọ ọrụ nwere anọ nnyocha na mmepe oru, anụ ụlọ, okuko, azụ na herbal na nnyocha ọgwụ na ebe mmepe, ya na otutu ndi injinia na ulo ogwu di elu, enwere 200kinds nke ngwaahịa n'okpuru uzo 10 kachasi emeputa iji jeere ndi ahia nke ulo na ndi uwa aka site na ngwa ahia nke ezigbo oru. Dị ka ogwu akara, soluble ike na premix akara, onu ngwọta akara, disinfectant akara na Chinese ogwu wepụ akara na na, niile edoghi onwem na elu tech ígwè na nditịm àgwà akara.
Ngwaahịa na-ọtụtụ-ere na etinyere dị iche iche buru ibu ma na-ajụ-sized anụ ụlọ ozuzu ụlọ ọrụ, mụ ngwaahịa mma na àgwà mgbe-sales ọrụ site na enterprise otuto. A na-ebupụkwa ngwaahịa anyị n'ahịa mba ụwa, yana ndị ahịa anyị na-eguzosi ike n'ihe na Middle East na Africa.
N'ime nkọwa a, anyị na-egosi ngwaahịa kachasị ọhụrụ emere na ahịhịa ọdịnala ndị China, nke na-enye arụmọrụ ka mma na immunopotentiator, ewezuga nkwụsi ike anụ ụlọ nkịtị na anụ ọkụkọ, ngwaahịa ndị a ga-eduga n'ọdịnihu ebumnuche n'ime ogologo oge iji meziwanye ọgụ na uto.
Ọgwụ ọkụkọ bụ uru anyị n'akụkụ niile. Site na iguzogide nje na ọgwụgwọ ụdị ọrịa niile, yana mgbakwunye nri na-edozi ahụ. Ihe ndị a na-ere ere dị ka AD3E, Onye na-echebe imeju, usoro vitamin, Amino acid, Tylosin, Iron Dextran, Oxytetracycline, Tilmicosin, Florfinical, Amoxicyline, Dexamethasone, Ivermictin na na.
Ngwaahịa anyị nabatara nke ọma ma nata ya nke ọma n'ahịa. Na nhazi nke ngosi, Injinia gosipụtara na saịtị nsị mmetụta nke ngwaahịa ntụ anyị, ngwa ngwa na enweghị ihe fọdụrụ.
Post oge: Mar-11-2021
Adreesị: Mpaghara Douyu nke Mpaghara, Mpaghara Luancheng, Shijiazhuang, Hebie, China